Ukungathandeki: Musa ukuqala i-imeyile 'Ndiyathemba ukuba oku kukufumana kakuhle' - Ezintsha
Eyona Ezintsha Ukungathandeki: Musa ukuqala i-imeyile 'Ndiyathemba ukuba oku kukufumana kakuhle'
Ukungathandeki: Musa ukuqala i-imeyile 'Ndiyathemba ukuba oku kukufumana kakuhle'
Imiyalezo emininzi ye-imeyile isuka ngeenyawo ezingalunganga.UJoe uMfama weebhokhwe / iFlickr
Abantu abaninzi andibazi baqala ii-imeyile ngombuliso wokubamba, ndiyathemba ukuba uphilile, Impendulo yam yesiqhelo: Ewe… andikwazi kwaye ndanele ngokwaneleyo ukucima i-imeyile yakho ngaphandle kokufunda ngakumbi.
Kwaye, ngenxa yeziphumo zophando olungekho sesikweni, abantu abaninzi baziva ngendlela efanayo.
UCatharine Hamm, umhleli wokuhamba we ILos Angeles Times , ofumana iindawo ezingenakubalwa ezivela kubaxhasi abanokubakho kunye neearhente ze-PR, naye woyika ukufumana ndiyathemba ukuba nizii-imeyile ezilungileyo. Kungenxa yobabalo lukaThixo ukuba ndiphilile, kodwa ukuba bekungenjalo? Ubuzile. Ndiqinisekile ukuba nam ndinokuba nomsindo… Kwaba bantu nditsho oku: Ukwakha ubudlelwane kuthetha ukundinceda ndenze umsebenzi wam, ungandibuzi ukuba ndinjani. Kuthetha ukuqonda intengiso yam, ungazami ukuqonda i-psyche yam. Kuthetha ukufumanisa nokujongana neemfuno zam zobuntatheli, ungandincedi ndifumane iziko lam lobuqu.
UBarbara Teszler, u-CEO we-Teszler PR eSanta Monica, Calif., UtshoUkuvula ndiyathemba ukuba le imeyile ikufumana ulungile ilungile apho phezulu kunye nefowuni ebandayo eqala Musa ukuxhoma okanye uthumele ulwazi olubalulekileyo olubomvu kwimvulophu (ulwazi olubalulekileyo lokuba uvunyelwe kwangaphambili kwityala ikhadi elinenkampani onokuthi ungakhathali). Abantu bakhetha 'Ndiyathemba ukuba uphilile' ukuze uqalise unxibelelwano lomntu-yenza kuvakale ngathi sele udibene nalo mntu, kwaye ukungahoyi okanye ukwala umntu odibene naye ebusweni kukrwada kunokungahoyi umntu ongamaziyo Andizange ndadibana, ke i-imeyile yakho ithiyori inokwenzeka ukuba ifundwe ngale ndlela-kodwa iyandibetha njengeyenziweyo kwaye ndinyanisile.
UMike Plugh, unjingalwazi onxulumene nonxibelelwano kwiKholeji yaseManhattan, ukholelwa ukuba le mibuliso inento yokwenza nokutolikwa komamkeli kunothumelayo. Ukuba umntu ubhala, 'Ndiyathemba ukuba ubeneveki emnandi,' okanye 'ndiyathemba ukuba oku kukufumene kakuhle,' kukho ithuba lokuba ubeneveki eyoyikisayo okanye ukuba ukude 'kakuhle,' kodwa ukuvuma kwethu ukubambisana Ubuntu ngumyalezo wokwenyani, endaweni yalo naliphi na ithemba elibambekayo, utsho uPlagh. Isizathu sokuba ezi zinto zimnandi zinokubonakala ngathi azinyanisekanga kungenxa yokuba basijonga kwiscreen esimhlophe, esingathandekiyo.
Rhuma kwiNcwadana yeNkcazo yemihla ngemihla Iseva ye-imeyile ibonisa izilumkiso zogaxekile, okanye ii-imeyile ezingafunekiyo.Ifoto: Ian Waldie / Getty Izithombe
NgokukaMcClain Watson, umlawuli weenkqubo zonxibelelwano zeshishini kwiNaveen Jindal School of Management e-UT Dallas, abantu kufuneka bakhanyise. Ukuba isigwebo esithi 'Ndiyathemba ukuba uphilile' kwi-imeyile senza impendulo evela kuwe, eso sigwebo siwenzile umsebenzi, utshilo uWatson. Ithoni uninzi lwe-imeyile yethu yemihla ngemihla yinkqubo, intengiselwano, kunye nezandi ngokungathi ibhalwe ziZombi zombies. Umceli mngeni kwabo bethu-njengam-abafuna ukubhala i-imeyile yabantu abaneentliziyo ezibetha kukufumana indlela yokwenza unxibelelwano oluvelayo nomfundi ukuze i-imeyile yethu ifundwe ngelizwi lomntu. ‘Ndiyathemba ukuba uphilile’ isenokungabi yeyona ndlela ilungileyo yokufezekisa loo njongo, kodwa yenza umsebenzi onesidima ixesha elininzi.
Ingcali ye-Etiquette u-Brooke Straiton ucebisa ukuba ubhale ii-imeyile zakho ngasemva. Isivakalisi sakho sokuqala kufuneka sishwankathele iimfuno zakho okanye injongo ye-imeyile, utsho. Oku kuvumela umntu ukuba azi kwasekuqaleni ukuba ngaba yile imeyile ekufuneka ijongiwe ngokukhawuleza, ifayilishwe kude njengolwazi, okanye nokuba leliphi inyathelo elifanelekileyo. Ukuba ufuna ukongeza 'izinto ezintle,' zishiye ziye esiphelweni.
UJill Tipograph, umseki weqela ImiSebenzi yamaQala okuQala , indawo yokubonisana nokunceda abantu abatsha ukuba bafumane uqeqesho okanye imisebenzi yokuqala, iyavuma ukuba kunzima ukutsiba ungene kwishishini, ke ukuqonda indlela eyiyo kubalulekile. Ubuntu bakho kunye nokunyaniseka kufuneka kuqinisekiswe. Kuya kufuneka ufumane into ekhululekile neyamkelekileyo ngokweendlela. Ayibobukhulu obulingana nabo bonke, utshilo. Yonke imeko yahlukile. Inkqubo kufuneka ibonakalise isiqu kunye / okanye umfanekiso onokuwufumana kwi-intanethi.
Pitch ogqibeleleyo: Iindlela ezisebenzayo zokuqalisa i-imeyile
Umbonisi ucele uJill Tipograph ukuba anike iingcebiso zokuphucula ii-imeyile:
Ndiyathemba ukuba le imeyile ikufumene kakuhle kufuneka ugcinelwe umnxeba okanye ulandele i-imeyile kwintshayelelo yobuqu. Ukuba awukamazi umntu okwangoku, kungcono usebenzise indlela eyahlukileyo.
Ukunyaniseka kufuneka kube yinyani, okanye ungayi kuloo ndlela. Yiba yingcali, ungabi ngumntu nje oqhelekileyo. Cinga ngokuthenga ikhadi: Ngaba ungathumela ikhadi eligqithisileyo okanye elinyanisekileyo kumntu ongamaziyo?
Impazamo kwicala elilondolozayo kwindlela. Qala i-imeyile kunye Mnu / Mnu / Mnu othandekayo; hambisa kuphela kumagama akho xa ubudlelwane okanye ubudlelwane busekiwe. Sawubona okanye Hayi yindlela eqhelekileyo. Sebenzisa amagama afanelekileyo: Ukuba igama labo nguRobert, sukubhekisa kubo njengoBob kwi-imeyile yokuqala.
Khankanya isalathiso (ukuba unemvume) -hlala uqala ngegama laloo mntu kwisifundo nakwimigca yokuqala. Yimpahla yakho leyo. Othandekayo (ongenanto) -Ndathunyelwa ngu (blank), owayecinga ukuba uza kuba ngumntu olungileyo onokunxibelelana naye (ongenanto).
Sondela kubantu abasebenzisa ijagoni yabo yemizi-yabantu abakwicandelo loyilo bathetha enye indlela, ngelixa abo basebhankini enye. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, kububulumko ukungazibaxi izinto. Amashishini ahlukeneyo anemigangatho eyahlukeneyo.
Sebenzisa umgca wokubulala i-imeyile-abantu abayi kukukhathaza ukufunda i-imeyile yangempela ukuba isifundo asihambelani. Qinisekisa ukuba kufanelekile, i-pithy, kwaye inika umntu isizathu sokuvula. Kuninzi kakhulu ukuya kugaxekile kwezi ntsuku, ke ukufaka umdla oqhelekileyo, i-alma mater okanye umntu okucebisileyo kubalulekile kwaye kubalulekile.
Thumela i-imeyile yokulandelela-ii-imeyile zokuqala zihlala zingafundi. Umahluko: Ndiyathemba ukuba ubeneveki emnandi, kwaye ndifuna ukulandela imeyile yam kwiveki ephelileyo.
Iiphivi yezilwanyana zasekhaya
Thintela i-emojis njengoko zinokubeka umbono wokuqala ongalunganga.
Musa ukukhankanya umntu ngaphandle kwemvume yakhe.
Musa ukunika umntu isiteketiso. Ibali: Isidanga sekholeji samva nje siye saya kuJill kwi-Intanethi sathi, Hayi Jilly. Akukho mntu undibize ngokuba nguJilly ukusukela ndisengumntwana, kuphela ngumyeni wam oneminyaka emininzi endibiza ngokuba luthando ngamanye amaxesha, utshilo. Ndadinwa kakhulu.
Ubungqina obuphindaphindiweyo-kuyintloni ukubona upelo olugwenxa kunye nokusetyenziswa ngokungachanekanga kwegrama-ngakumbi igama lomntu okanye inkampani engeyiyo (cinga usetyenziso lwekholeji, umzekelo, igama lekholeji elingalunganga kwisincoko).
Musa ukucela ingcebiso yasimahla okanye umsebenzi ngaphandle kokunikezela ngento enexabiso ngokutshintsha. Oko kugqithisile kwaye kucinyiwe.
Indlela uMariah Carey anokuGcina ngayo uKhondo loMsebenzi wakhe
UShirley MacLaine Ufanelwe ngcono kunokuba 'liLizwi lokuGqibela'
I-Q & A: 'Halt and Catch Fire' Showrunners zilungele ukuPhakama
'ISicario: Usuku lweSoldado' iyaphazamisa ngokungakhathali
gummies ukukunceda ulale
ingaba unayo ingwe
Kutheni ndikhangeleka ngcono esipilini kunakwimifanekiso
Iimuvi eziza kuphuma ngoDisemba 2
Imiboniso emihle hayi kwi-netflix
ubomi bokuqala obalishumi elinesihlanu kaharry august
khangela iinombolo zeeselfowuni simahla